Kooxda Dortmund oo kulan baaqday xalay la ciyaaraysa kooxda Manoco ee France | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Kooxda Dortmund oo kulan baaqday xalay la ciyaaraysa kooxda Manoco ee France
Kooxda Dortmund oo kulan baaqday xalay la ciyaaraysa kooxda Manoco ee France
Muqdisho – Dhamaan ciyaartooyda kooxda Borussia Dortmund ayuu la soo darsay shoog iyo jiha wareer kadib markii waqti yar kahor kulankii ay xalay la balansanaayeen kooxda Manoco lala eegtay qarax kaas oo ka dhacay afaafka hore ee Hotel-ka ay daganaayeen ciyaartoydu.
Difaaca kooxda ee Marc Bartra ayaa galay qatar isaga oo loola cararay Isbitaalka.
26 jirkaan 12-ka kulan u cayaaray xulka Spain ayaa kusoo biiray kooxda ka dhisan Bundesliga isaga oo kaga yimid Barcelona bishii June ee sanadkii la soo daafay.
Marc Bartra oo uu dhaawac ka soo gaaray dhibtii xalay ku dhacday kooxda ayuu qabaa waaxa uuna la maqnaan doonaa dhaawac ka soo gaaray gacanta.
Thomas Tuchel ayaa ku maqnaan doona dhaawac, laakiin waxaa dib ugu soo laabtay tababarka Marco Reus.
Mario Goetze, Andre Schurrle iyo Durm, ayaa maqan.
Dhanka As Monaco xidigo badan ayaa ka maqan Bokayoko oo ganaax ku seegi doona ciyaartaan, sidoo kale Sidibe, Boschilia iyo Carrillo ayaa dhaawacyo ku maqan.
Kaliya hal koox oo Faransiis ah ayaa garaacday Dortmund walibana ciiddeeda ku garaacday tartamada Yurub (D3, W5), waxa uuna ahaa kii Marseille ee December 2011 kaas oo ku dhamaaday (3-2).
Borussia Dortmund ayaa gaartay wareegga quarter-finalka Champions League markii seddexaad ee shantii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay.
Borussia Dortmund ayaa laga badiyay kaliya hal kulan siddeeddii kulan ee Champions League xilli ciyaareedkan (W5 D2), kaasina waxa uu ahaa mid banaanka ay kala soo kulantay Benfica.
Si kastaba ha ahaatee, Dortmund ayaa laga badiyay toddoba kamid ah 10-kii kulan ee ugu dambeysay ee Champions League ee marxaladda bug-baxda (W3).
Waa markii labaad oo muddo saddex sano ah Monaco ay gaarto wareegga sideed dhamaadka tartankaan. Si kastaba ha ahaatee, markii ugu danbeysay ee ay ka dhigtay semi-finalka waxa ay aheyd 2003/04, markii ay ugu danbeyn garaacday Porto finalka.
Monaco ayaa laga dhaliyay 13 gool xilli ciyaareedkan Champions League – oo ay ku jiraan sideed looga soo dhaliyay labadii kulan ee ugu danbeysay banaanka – waana in ka badan koox kasta oo ka mid ah wareega quarter-finalka.
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa dhaliyay toddobo gool toddobadii kulan ee Champions League xilli ciyaareedkan, oo ay ku jirto seddexleey uu ka dhaliyay kulan ka dhanka ahaa Benfica.
Fabinho waxaa uu si toos ah ugu lug lahaa seddex kamid ah lixdii gool ee ugu dambeeyay ee Monaco Champions League ka dhalisay (1 gool, 2 gool caawin).
Saacadda: 9:45 Habeenimo
Previous: Bayern Munich oo carriga Jarmal-ka kusoo dhawayn doonta kooxda Real Madrid
Next: Xaqiiqooyinka kulanka Atletico Madrid iyo Leicester City